Nhau - Ndezvipi zvakanakira nekuipira kwejira repolyester
I. Zvakanakira jira repolyester:
1. Polyester jira rine simba rakakwirira. Simba reiyo yakakosha fiber ndeye 2.6 ~ BAI5.7 cN / Dtex, uye simba rehigh-fiber fiber iri 5.6 ~ 8.0cN / Dtex. Nekuda kweiyo yakaderera hygroscopic chivakwa, iyo yakanyorova simba uye yakaoma simba zvakangofanana zvakafanana. Simba rayo rekukwirisa rakakwira zvakapetwa ka4 pane iya yenylon uye kakapetwa makumi maviri pane iya yeiyo viscose fiber.
2. Super elasticity ye polyester machira. Iyo elastic modulus ndeye 22 ~ 141cN / dtex, 2 ~ katatu zvakapetwa kupfuura iyo yenylon, iyo isingaenzaniswi nemamwe machira.
3. Polyester jira rine yakanaka kupisa kuramba. Zvinogona kutaurwa kuti dacron ndiyo inonyanya kupisa-kupisa uye inonamira chemakemikari fiber machira. Kana ikagadzirwa muketi yakakwenenzverwa, inogona kuramba ichibata zvakanaka isina ironing yakawandisa.
Ii. Kukanganisa kwe polyester machira:
1. isina hunyoro hunyoro, polyester machira hunyoro hwekumwa, saka polyester zvipfeko zvichave nekupisa kwekunzwa, neyakareruka electrostatic, guruva hutachiona, kukanganisa kwerunako nekunyaradza, asi mushure mekuchenesa kuri nyore uye kunofinha, uye simba rakanyorova rinenge risingadaro. donhwe, hapana deformation, ine basa rakanaka kwazvo rinosakika.
2. Dhayi dhayeti. Nekuti hapana chaiyo dhayi dhizaini pane polyester mamorekuru cheni uye polarity idiki, kudhaya kwakaoma uye kuri nyore kuvezwa.
3, iri nyore kupura, jira repolyester ndeimwe yezvinhu zvekugadzira faibha, uye pese apo jira rekugadzira faibha riine nzvimbo yekuzadza, polyester jira zvinhu zvinoshandiswa kwenguva yakati zvichave nenzvimbo yekuzadza.
Hangzhou Dro Textile inyanzvi yekugadzira machira epolyester. Kugamuchirwa kwekutaurirana